‘यसकारण विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पर्छ जिभिएन कलेज’ - Nepalgunj Business
नेपालगन्ज १६ असार : एसइई उत्तिर्ण गरेपछि नेपालगन्जमा उच्च शिक्षा पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि जिभिएन कलेज पहिलो रोजाईमा पर्छ । इसइई उत्तिर्ण गरेपछि कहाँ पढ्ने ? अधिकांस विद्यार्थी अन्यौलमा हुन्छन् । तर त्यो अन्यौलता जिभिएनले हटाउन सक्छ । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कम्प्युटर साईन्स, होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एण्ड टुरिजम पढ्न चाहाने विद्यार्थीका लागि जिभिएन उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ । यसपटकदेखि त प्लस टुमा कानून संकाय समेत शुरु भएको छ । प्लस टुबाटै कानून पढ्न चाहाना भएकालाई जिभिएनमा अवसर छ ।
जिभिएन गुणस्तरिय पढाईका कारण राम्रो नतिजा ल्याउन सफल कलेजका रुपमा परिचित छ ।बिज्ञान लगायतका संकायमा यसक्षेत्रमा सर्बोत्कृष्ट नतिजा ल्याईसकेको छ । यहाँ जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययरत पनि छन् । कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गणेश भण्डारी भन्छन्,–‘जिभिएनमा धेरै विद्यार्थी आउनुको कारण नै यहाँको पढाई अब्बल हुनु हो । त्यसबाहेक सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार र अतिरिक्त गतिबिधिलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिलाई विद्यार्थीले रुचाउनु पनि हो ।’
अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुतले आफ्नै भवन सहितको पूर्वाधार उक्त कलेजको ‘प्लस प्वाईण्ट’ बनेको छ । राम्रो कलेजको पहिलो सर्त भनेकै पूर्वाधार हो । घर नबनी कसरी पढ्ने ? कसरी पढाउने ? यो प्रश्नको उत्तर जिभिएनबाटै सहजै पाउन सकिन्छ । पूर्वाधार पछि राम्रा शिक्षक, शैक्षिक सामाग्री, अतिरिक्त गतिबिधिको व्यवस्थापनलाई कुनै कमी हुन नदिएको सिईओ भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘हाम्रो कलेजमा आउने विद्यार्थीले नयाँपनको महसुस गरोस् र पढाईमा अब्बल भएर निस्कियोस् भन्ने चाहान्छौ । त्यसै अनुसार काम गर्दै जाँदा राम्रो नतिजा पाएका छौं ।’
जिभिएनले विद्यार्थीलाई कितावको ‘किरा’ बनाउने मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणमै लाग्न प्रेरित गर्ने गरी पढाईरहेको भण्डारी बताउँछन् । चितवनमा ध्रुमुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको अन्र्तराष्ट्रिय रंगशालाका लागि विद्यार्थीले रकम जुटाए । जुन कार्यप्रति सबैतिरबाट प्रशंसा गरिएको थियो । स्वयं ध्रुमुस र सुन्तलीले कलेजलाई धन्यबाद दिए । भण्डारी भन्छन्,–‘हाम्रो कलेजमा पढेका विद्यार्थीले देशलाई समस्या पर्दा अगाडी सर्छन भन्ने कुराको सन्देश पनि दिन सकेका छौं ।’
जिभिएन कलेजका बारेमा चर्चित कलाकार एवं सामाजिक अभियानता कुन्जना घिमिरे ( सुन्तली) यसो भन्छिन ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार १६, २०७६ 10:00:48 AM